Fanavaozam-piangonana - Wikipedia
(tonga teto avy amin'ny Reforma)
I Martin Lotera tamin'ny taona 1529, sary nataon'i Lucas Cranach der Ältere.
Ny Fanavaozam-piangonana, izay atao hoe koa Reformasiona na Reforma, dia fihetsiketsehana ara-pivavahana tamin' ny taonjato faha-16 tao amin' ny Fiangonana Tandrefana izay nanapitra ny fahambonian' ny Papa eo amin' ny fitondram-piangonana sady niafara tamin' ny fiforonan' ny Fiangonana prôtestanta maro. Ny Fanavaozam-piangonana dia vokatry ny faniriana ny hiverina amin' ny loharano nipoiran' ny kristianisma. Te hanome lanja ny fivavahana sy ny fiainana ara-tsôsialy amin' ny fomba fijery hafa koa ireo mpanavao fiangonana (na reformatora).
Ny Reformasiona dia ahitana taratra ny fanahian' ny fanahin' olombelona, ny amin' ny famonjena, izay ivon' ny fisaintsainan' ireo mpanavao finoana, izay namaky bantsilana ny fahasimban' ny fiarahamonina manontolo nateraky ny fivarotana ny indolzansa. Nanararaotra ny firoborobon' ny fanaovana pirinty ny mpanavao finoana mba hanaparitahany ny Baiboly amin' ny fitenin' ny olona andavanandro (indrindra amin' ny fiteny alemàna taorian' ny fandikan-teny nataon' i Martin Lotera), sady naneho fa ny Baiboly dia tsy miresaka ny amin' ny olo-masina, na ny amin' ny fanaovana fanompoam-pivavahana amin' i Maria Virjina, na ny amin' ny afo fandiovana. Ny fakana hevitra avy amin' ny Baiboly ho filamatra anefa no isan' ny zavatra nanetsika ireo mpanavao finoana. Izany foto-kevitra izany, izay fantatra amin' ny teny latina hoe Sola scriptura ("ny Soratra Masina irery ihany"), no nitari-dalana azy ireo.
Natombok' i Martin Lotera fony izy monka (na moanina) katôlika tamin' ny 31 Oktobra 1517 tao amin' ny Empira Masina sy i Ulrich Zwingli tao Zorika, avy eo i Martin Bucer tao Strasborga ary taty aoriana i Jean Calvin tao Parisy sy tao Jeneva ny Reformasiona ka nahazo ny ampahany be tamin' i Eorôpa Avaratra-Andrefana. Nandamoka ny ezaka fampihavanana natao tamin' izay ka teraka ny fivakisana teo amin' ny Fiangonana katôlika rômana sy ireo Fiangonana prôtestanta. Ny Reforma nataon' ny Fiangonana katôlika hanoherana izany nanomboka tamin' ny kônsily tao Tridentio (na Trento) dia tsy nahatafaverina afa-tsy ampahany amin' ny mponina efa niova ho prôtestanta.
Nanana endrika pôlitika koa ilay Reformasiona prôtestanta satria lasa fitaovana nentin' ireo andriandahy tany Eorôpa haneho ny fahaleovantenany manoloana ny fahefan' ny Papa izay lazaina fa fitondram-pajakan' Andriamanitra (teôkrasia) manerana izao tontolo izao. Nentin' ireo mponina maro hikomy manoloana ny andriamanjaka tsy ankasitrahany, toa izay nisy tao Ekôsy sy tao Hôlandy aspaniôla, koa ny Reformasiona. Maro ny vokatr' ilay fihetsiketsehana tamin' ny taonjato faha-16, dia disadisa teo amin' ny emperora Habsbourg sy ireo andriandahy alemàna, ary koa ireo ady an-trano tao Frantsa sy tao Angletera ary tao Ekôsy.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Fanavaozam-piangonana&oldid=1012702"
Voaova farany tamin'ny 13 Jolay 2021 amin'ny 08:19 ity pejy ity.